युवा संघ जाजरकोटमा निलम्बित संयोजकद्वारा पत्रकारमाथि भौतिक हमलाको प्रयास – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
३१ श्रावण २०७७, शनिबार १९:३३ English
जाजरकोट, २५ असार । समाचार लेखेका कारण युवा संघ जाजरकोटका तत्कालिन संयोजकले पत्रकार माथी हातपातको प्रयास गरेका छन । युवा संघ जाजरकोटका निलम्वित सयोजक दिपेन्द्र शाहीले समाचार लेकेखै कारण पत्रकारलाइृ भौतिक आक्रमणको प्रयास गरेका हुन् ।
‘युवा संघ जाजरकोटका संयोजक शाही प्रहरी नियन्त्रण’ भन्ने शिर्षकको समाचारमा आपत्ति जनाउँदै उनले भेरीमालिका दैनिकका कार्यकारी सम्पादक रेशम बहादुर खड्कालाई हातपातको प्रयास गरेका हुन् । पत्रकार खड्काले शाहीले आफूलाई अपशब्दसहित गालीगलौज र हातपातको प्रयास गरेको गुनासो गरेका छन् ।
जिल्लाको गैरीखालिदेखि ठाँटि बजार जाने क्रममा शाहीले शान्तिचौतारमा रोकी खड्कामाथि अभद्र ब्यवहार गरेका हुन । ‘समाचार लेख्न आउदैन ? तिम्रो यो कदमले राम्रो परिणाम आउँदैन ? भन्दै ममाथि गाली गरेर भौतिक रुपमा हातपात नै गरे’ पत्रकार खड्काले भने ।
खड्का ठाँटिबाट पत्रिकाको कार्यालयमा फकिर्दै गर्दा शाहीले बाटो कुरेर मोटरसाइकलको चाबीसमेत थुतेका थिए । शाहीसँगै रहेका उनका भाई शुसिल शाहीले खड्काको तस्बीर खिच्ने तै होस् भन्दै खड्कालाई अभद्र ब्यवहार गरेका थिए ।
शाहीले बिहिवार भेरी नगरपालिका प्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीको निवासमा पुगेर मोटरसाइकल तोडफोडको प्रयास गरेको नगर प्रमुखका भाई भरत घर्तीले बताएका छन् ।
विभिन्न आरोप लागेपछि शाहीलाई युवा संघले संयोजकबाट निलम्बन गरेपनि शाहीले भने आफू २० दिनपछी युवा संघ जाजरकोटको संयोजकमा पुनः दोहरीने दाबी गर्दै धम्की दिएका छन् । शाही नगरप्रमुख घर्तीमाथि हातपात गरेपछि युवा संघको जिल्ला संयोजकबाट निलम्बनमा परेका थिए ।
२५ असार २०७७, बिहीबार २३:२० मा प्रकाशित